तपाईंको अमेजन एसईओ कसरी सुधार गर्ने?
सांख्यिकीय डेटाको अनुसार, 55% भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन खरिद गर्न मनपर्छ, अमेजन व्यापारिक प्लेटफर्ममा फर्कनुहोस् जुन उनीहरूलाई चाहिन्छ. यो हाम्रो दिनहरुमा बिक्रेताहरूको लागि एक सन्दर्भ बिन्दु हो. प्रयोगकर्ताहरूले यो प्लेटफार्म पहिलो पटक यसको कारणले गर्दा यो वेबसाइटको राम्रो प्रतिष्ठा, मूल्यहरूको तुलना गर्न र वेबमा सर्वोत्तम मूल्य, ग्राहक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पढ्न सक्ने क्षमता पाउने क्षमताको संख्याको कारणले गर्दा जाँच गर्दछ।. यसबाहेक, प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छ कि यस प्लेटफर्मको साथ नकारात्मक अनुभवको अवस्थामा, उनीहरूले पूर्ण मुआवजा पाउनेछन्. यी सबै सुविधाहरू दुवै खरिदहरू र विक्रेताहरूको लागि अमेजन फायदेमंद बनाउँछन् - dedicated nursing associates. यही कारण हो यदि तपाईं आफ्नो संभावित ग्राहकहरु को सबै भन्दा ठूलो रकम को लक्षित गर्न चाहते हो, अमेज़न यिनी उद्देश्यहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो मंच हो. यस व्यापारिक प्लेटफर्ममा तपाइँको सूचीकरण भन्दा बढी प्राप्त गर्न, तपाईंलाई केहि उत्पादन इन्जिन अनुकूलन रणनीतिहरू लागू गर्न आवश्यक छ तपाईंको उत्पादनहरु र व्यापार प्रदर्शन.
यो लेख तपाईंको Amazon एसईओलाई सुधार गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ र तपाईंको उत्पादन यो सबैभन्दा ठूलो अनलाइन रिटेल प्लेटफर्ममा देख्न सक्दछ.
अमेजनमा रैंकिंग उत्पादनको सिद्धान्त
त्यहाँ धेरै आवश्यक आवश्यक कारकहरू छन् जुन तपाईको अमेजन पेज एसईओ सुधार गर्न कार्यमा राख्न आवश्यक छ।. यदि तपाईं राम्रो तरिकाले अनुकूलित उत्पादन सूची सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई ध्यान केन्द्रित गर्न कुन पक्षहरूमा जान्न आवश्यक छ.
अमेजन ए9श्रेणी एल्गोरिदम अनुसार, एक सम्भावित ग्राहकले खोज क्वेरी पछि निम्न डेटा देखाउँछ:
भोल्युम क्लिक गर्नुहोस्;
उत्पादन मूल्य निर्धारण;
लक्षित कीवर्ड र ट्याग;
उत्पाद उपलब्धता (हाल उपलब्ध छ वा स्टकमा);
यी सबै पहलहरु प्रदर्शन कारकहरु र प्रासंगिक कारकहरुमा विभाजित गर्न सकिन्छ. तत्वहरूको पहिलो समूहले के संकेत गर्दछ कि अमेजनहरूले यी गरेर गरेर कति पैसाको आधारमा उत्पादन रेट गर्न प्रयोग गर्दछ. प्रासंगिक कारकहरू प्रासंगिकता हुन् जुन प्रयोगकर्ता खोज पछि.
आउनुहोस् पहिला प्रदर्शन आधारित आधारभूत कारकहरू छलफल गर्नुहोस्. सबैभन्दा पहिला, यो रूपान्तरण दर हो. कुराकानीहरू अमेजन ईन्जिनियरिङ् कारकहरू हुन्. तपाईं अमेजन देखाउन धेरै प्रभावकारी रणनीति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको उत्पादन राम्रो तरिकाले रूपान्तरित हुँदैछ. जब यो रूपांतरणको एक स्पष्ट चित्र प्राप्त हुन्छ, अमेजन अत्यन्तै कठिन छ. तपाईं एकाई मेट्रिक्स जस्तै एकाइहरू र सत्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तर सबै स्थिति नियन्त्रण गर्न पर्याप्त डेटा छैन.
तपाइँ आफ्नो कुराकानीत्मक डेटा रिपोर्टमा जानुहुन्छ, त्यसपछि व्यावसायिक रिपोर्टहरू, विस्तृत पृष्ठ सेल्स र अन्तमा ट्राफिक. यहाँ तपाईँले इकाई सत्र प्रतिशत वा अन्य शब्दहरू सत्रहरूको संख्या जाँच गर्न आवश्यक छ.
आफ्नो अमेजन रेटिङ सुधार गर्न, तपाईले आफ्नो खरिद बक्स प्रतिशत समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ. उदाहरणका लागि, प्रति खरीद बाकसले तपाईंको अमेजनले अमेजनलाई संकेत गर्नेछ जुन तपाईले बढी परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो छवि अनुकूलन र उत्पादन मूल्य सुधारमा प्रदर्शन-आधारित रैंकिंगलाई असर गर्न सक्नुहुन्छ.
अब, अमेजन रैंकिंग कारकहरु मा एक नजर राखन को लागी जो प्रासंगिकता मा आधारित छ. प्रासंगिक कारक पृष्ठमा प्रस्तुत खोज क्वेरी र जानकारी को प्रासंगिकता बारे सबै हुन्.
तपाईंको पृष्ठ प्रयोगकर्ताको प्रश्नको लागि थप सान्दर्भिक बनाउनको लागि, तपाईंले आफ्नो उत्पादन सूची शीर्षक अनुकूलन गर्न आवश्यक छ. तपाइँलाई तपाइँको शीर्षक र वर्णनमा तपाईको प्रासंगिक ग्राहकहरूलाई पृष्ठमा तपाईंको उत्पादनहरू फेला पार्न मद्दत पुर्याउने सबै भन्दा सान्दर्भिक र लक्षित कीवर्ड समावेश गर्न आवश्यक छ.
आवश्यक तत्वहरू जुन तपाइँले तपाइँको शीर्षकमा समावेश गर्न आवश्यक छ उत्पादन ब्रान्ड, छोटो वर्णन (रङ, साइज, सामग्री, मात्रा), उत्पादनको लाइन र जसको लागि यो उत्पादन डिजाइन गरिएको छ (बालबालिका, वयस्कहरू, आदि।. )